Mwakpo cyber isii a na-ahụkarị na eCommerce | ECommerce ozi ọma
Mwakpo cyber isii a na-ahụkarị na eCommerce
2525 Ruo n’ókè na ha nwere ike ịmepụta ụfọdụ ihe mere na mmepe ha ka ị ga-enwe ike inyocha na obere oge. Ebee ka anyị ga-egosi gị ihe bụ ọgụ mwakpo ndị a na-ahụkarị na ụzọ kachasị mma iji gbochie nnukwu nsogbu a.
Yougaghị echefu na ụdị aghụghọ a dị oke egwu na ecommerce ndị ahụ enwere nke ka ukwuu ndị ahịa kpọtụrụ ma ọ bụ ndị ọrụ. N'ihi na ihe mbụ ị kwesịrị ịma na mbuso agha nke cyber bụ mbuso agha ọgụ, ọ bụ ịnwa ikpughe, gbanwee, kwalite, bibie, wepu iji nweta ohere na-enweghị ikike ma ọ bụ jiri akụ.
Mmetụta ya nwere ike bụrụ ihe na-agbawa obi n'ezie maka ọdịmma azụmaahịa dijitalụ, n'agbanyeghị ụdị ya na usoro ya. E nwere ụdị cyberattacks dị iche iche na-agbanwe ma na-emeziwanye kwa ụbọchị. Yabụ, enweghị ụzọ ọzọ karịa ịkwadebe ma zaghachi n'ụzọ kachasị dị irè: iji nyocha na Ọganihu nke nkà na ụzụ. Mana inwe ike ihu egwu ndị a, ọ dị mkpa ịmara ha nke ọma ma mara otu esi amata ọdịiche.
1 Mwakpo Cyber: ebumnobi
5 Ịtụ egwu
Mwakpo Cyber: ebumnobi
Ebumnuche nke hackers ma ọ bụ hackers Ha dị ọtụtụ karịa iche n’echiche site na mbido. Ha nwedịrị ike inwe ọdịmma ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ agha na ụfọdụ n'ime ikpe kachasị njọ, si otú a na-emetụta echiche nke agha cyber. Mana otu ebum n’uche bụ izu ohi n’ụlọ ọrụ, izu ohi njirimara na mkpọnwụ nke netwọkụ kọmputa. Ma n'ezie enwere ike ịkpọbata ha site na dijitalụ ma ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ị malitere.
N'aka nke ọzọ, obi abụọ adịghị ya na nsonaazụ nke ọgụ cyber nwere ike bụrụ oke mbibi azụmahịa gị. Karịsịa ma ọ bụrụ na i chee na ụdị ọgụ ndị a na-agbanwe na ụzọ ọhụrụ na-enyocha iji mebie ụlọ ọrụ na ebumnuche bụ isi nke itinye data gị. Maka nke a, ọ dị mkpa ịkọwa nke ọma gbasara ụdị mwakpo cyber kachasị na ihe ha nwere ike iduga na ụlọ ọrụ.
Offọdụ n'ime ha bụ ndị a ma ama karịa ndị ọzọ, mana n'ọnọdụ niile ọ nwere ike ịmepụta karịa otu nsogbu maka gị site ugbu a. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị mere o ji dị ezigbo mkpa ịmata ha, iji opekata mpe ihe mgbochi nke mere na n'ụzọ dị otú a, ị ga-amachi mmetụta ya. N'ihi na n'ezie, enwere ike ịbịa oge mgbe ha enweghị ike ịkọwapụta ya, ọ ga-akala oge maka usoro ndị ịchọrọ itinye site ugbu a gawa.
Ebumnuche nke malware a bụ ibunye kọmputa mba ọzọ kpokọta ozi dị n'ime ya ma mepụta usoro ihe omume na-emerụ ahụ maka ọdịmma gị n'ịzụ ahịa kọmputa. Nke ahụ bụ, a na-eji ha enweta uru site na ire ere dị nro. Ha dị mfe iwebata na ụkpụrụ enwere ọtụtụ ndị ọrụ na-echekwa klaasị egwu a. Site na nke a, mgbochi ha dị mfe karịa na egwu ndị ọzọ ebe ọ bụ na ngwaahịa dị iche iche dị n'ahịa iji kpochapụ ha site na mbido.
N'ọnọdụ ọ bụla, spyware bụ nnukwu nsogbu maka azụmahịa kọmputa gị n'ihi na ọ dabere n'eziokwu bụ na spyware bụ malware na-anakọta ozi na kọmputa wee nyefee ozi a na mpụga na-enweghị ihe ọmụma ma ọ bụ nkwenye nke onye nwe ya nke kọmputa. N'ụzọ dị otu a, ị ga - ahụta onwe gị itinye aka na usoro nke ọrụ nsogbu dị ukwuu maka ịgbachitere ọdịmma gị.
N'ezie, nke a bụ otu n'ime ihe kachasị dị egwu ebe ọ na-emetụta mgbasa ozi na n'ihi nke a ị kwesịrị ịdịkwu enwe mmetụta ọsọ ọsọ na ngwọta na ị ga-enye site na oge ndị a. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, sọftụwia a iji gosipụta mgbasa ozi na-elekwasị anya na izu data site na ndị ọrụ, mana ọ nwekwara ike imetụta ụlọ ọrụ. N'okwu a, a na-eji nkwado sitere na ozi ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ nyere.
Nwere ike ịmata ihe omume a n'ihi na ọ na-egosi ma ọ bụ na-enye mgbasa ozi achọghị ma ọ bụ na-eduhie eduhie, ma ọ bụrụ na agbakwunyere na ibe weebụ site na eserese, akwụkwọ mmado, windo na-ese n'elu mmiri, ma ọ bụ n'oge echichi nke mmemme na onye ọrụ. Mmetụta ya nwekwara ike ịdị njọ ma site na nke a, obi abụọ adịghị ya na ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị kwesịrị izere ọnọdụ a n'ọnọdụ niile. Ya mere na n'ụzọ dị otú a, ha na-ewepụtakwu ntụkwasị obi n'etiti ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa ma na-aga n'ihu na-arụ ọrụ site na weebụsaịtị nke ajụjụ dị.
Ọbụghị maka na amara ha nke ọma karịa ha anaghị adịkarị egwu. Ọ bụghị obere. Ọ bụrụ na ọ bụghị, na Kama nke ahụ, ya oru ihe nwere ike ikwere gị ihe karịrị otu nsogbu site ugbu a. N'echiche a, ị gaghị echefu na yana Trojans, ikpuru bụ otu n'ime mwakpo commonntanetị na-adịkarị. Ya mere ị ga-amata ya iji kpochapụ ya ozugbo enwere ike iji rụọ ọrụ zuru oke na ụlọ ahịa dijitalụ.
Mgbe n'aka nke ozo, akuku ozo I kwesiri ima site ugbua gawa bu nke na-ezo aka na mbufe ya. A na-eme usoro a site na ịmegharị ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, si otú a na-ezipụ otu nye ndi ozo ma si otú a na-akwalite mmụba ngwa ngwa ma dị egwu nke mmetụta ya. Ọ dabara nke ọma maka ọdịmma gị, ọ bụ iyi egwu a na-achịkwa nke ọma n'ihi ọtụtụ ngwọta ya nke a na-atụgharị uche na ngalaba kọmputa na nchekwa netwọkụ.
O doro anya na nsogbu ọzọ ụlọ ọrụ kọmputa na-enwekarị bụ nsogbu a, nke dị mwute na ịrị elu ya. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na ọ na-agbasa n'ụzọ dị mfe n'ọnọdụ ndị ọzọ ebe ọ nwere ike gbasaa site na e-mail nke ndị ọrụ n'onwe ha na ihe kachasị njọ, n'ụzọ dị oke oke na mbibi. Site na ebumnuche zuru oke na nke ahụ abụghị ihe ọzọ karịa izu ohi nke ndị omempụ ma ọ bụ ndị isi cybercriminal na-enweta ọdịnaya site na ozi ịntanetị nwere ọrịa. Ọ dị mfe ma na-eyi egwu.
N'aka nke ọzọ, okwu a nke nwere ike ịmatakwu dị ka izu ohi njirimara, bụ okwu kọmputa nke na-akpọ ihe atụ nke mmegbu kọmputa yana nke a na-eme site na iji ụdị injinia mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nke akọwapụtara site n'ịgbalị iji nweta ozi nzuzo na aghụghọ. Ọ bụ ihe ọzọ n'ime ihe ị ga - egbochi ma ọ bụrụ na ịchọghị na n'ikpeazụ ha na - emetụta ngwa ọrụ gị. Na ọghọm na ị ga-achọ ngwọta dị ike karịa nke ndị ọzọ yana na ọ nwere ike ịnwe ọnụ ahịa ego siri ike.
Ransomware (nke a makwaara dị ka rogueware ma ọ bụ scareware) na-egbochi ịnweta usoro gị ma chọọ ka a kwụọ ụgwọ iji wepụ ihe mgbochi ahụ. Mwakpo ndị kasị dị ize ndụ akpatawo ransomware dị ka Cerber, Cryptolocker na Locky. N'ezie, ọ bụ ihe doro anya mgbe ngwaọrụ gị abanyela na ransomware, ebe ọ nwere ike ọ gaghị enwe ike ịnweta kọmputa gị. Mgbe ị na aka nke ọzọ, ịmara na ịkwesịrị iji ngwa mwepụ nke ransomware nke ngwanrọ antivirus gị, nke kwesịrị ịchọ ma wepu mgbalị ọ bụla ransomware achọtara na kọmputa gị.
Ugboro ụdị ọgụ ndị a na-arịwanye elu. Ihe a na-enweta na ha bụ igbochi usoro nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ, na-arịọ maka ihe mgbapụta maka ịhapụ ya. Nsonaazụ a nwere ike ịbụ ọdachi, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ a na-ekwu okwu kpam kpam kpọnwụrụ akpọnwụ. Companieslọ ọrụ buru ibu enwetawo mwakpo dị otú ahụ n'oge na-adịbeghị anya, na-emepụta nnukwu mgbasa ozi mgbasa ozi. Akụkụ dị mma bụ na nje virus nke ransomware, na-arịwanye elu ma na-elekwasị anya na ngwaọrụ mkpanaka, apụtawo nke ọma na ọha mmadụ.
Are na-eche ihu iyi egwu dị iche iche na nke ahụ nwere njikọ nke olu mgbasa ozi na email. Na omenala, mwakpo sitere na ndị spammers ezubere iche maka akaụntụ email, mana ugbu a ọ ga-ekwe omume ịchọta blog spam, ozi ngwangwa, ịkparịta ụka n ’mmekọrịta mmadụ na ibe ya dịka Facebook na ekwentị.
Otu ihe, ngwaọrụ gị na-enweta ozi spam na-achọghị na mgbe niile, mgbe mgbe n'ọtụtụ buru ibu. Ndị na-ezigara spam dị ka azụmahịa, ndị enyi, ma ọ bụ ezinụlọ. Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, yana gbasara mkpochapụ ya, ekwesiri ịmara na ị ga-ahazi ntanye spam na igbe mbata gị ma kaa ozi niile enyo dị ka spam. Wee wepu aha na akwụkwọ akụkọ spam na / ma ọ bụ mgbasa ozi na blacklist na-emegharị ndị spamm.
Dị ka ị hụworo, enwere ọtụtụ egwu ị nwere, yabụ na ị gaghị enwe nhọrọ ọ bụla ma ọ bụghị imezi ha ka azụmahịa gị ghara imebi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Mwakpo cyber isii a na-ahụkarị na eCommerce
Insurance maka nchedo nke ndi oru onwe ha na ahia dijital
Etu esi eji vidiyo na-ere ihe?